अनमोल केसीका फ्यानहरुका लागि दुखद खबर ! उनलाई कहिल्यै निको नहुने रोगको सिकार बन्दै - Sudur Khabar
अनमोल केसीका फ्यानहरुका लागि दुखद खबर ! उनलाई कहिल्यै निको नहुने रोगको सिकार बन्दै
हिलेका सुपरस्टार अनमोल केसीलाई कहिल्यै निको नहुने रोग लागेको छ । यसो भन्दा अनमोलको फ्यानलाई नराम्रो लाग्न सक्छ । तर यो साँचो हो । एक अन्तर्वार्तामा अनमोल केसीले आफुलाई कहिल्यै निको नहुने रोग लागेको बताईएको हो ।
उनले आफुलाई लोवर ब्याक पेन भएको र त्यसले दाड पछाडीको मासु च्यातिएको बताएको हो । उनका अनुसार यो रोग कहिल्यै निको हुदैन । बेला बेलामा शाारिरीक व्यायाम भन्ने गरिरहनुपर्छ ।
अनमोललाई यो रोग कसरी लाग्यो भने कुरा उनी आफैले अन्तर्वातामा बताईएको छ । उनले आफुले फिल्मको लागि मेन्टेन गर्न शारिरीक व्यायाम गर्दा आफ्नो दाड पछाडीको मासु च्यातिएको र त्यसको कारण लोवर ब्याक पेन भएको बताईएको हो ।
यसले सामान्य असर बाहेक खासै अरु असर पादैन । बेला बेलामा व्यायाम र आराम भने गरिरहनु पर्ने बुझिएको छ ।
प्रदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउदै हो भने हेर्नुहोस आजको बिनिमयदर- आजमिति २०७४ फाल्गुन २३ गते, बुधबार । तदअनुसार ७ मार्च २०१८
राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी नै दोहोरिने